Ramos Oo Markale Dhaawac Soo Garay Xilli Uu Sii Dhammaanayo Waqtigiisa Kooxda Real Madrid – Garsoore Sports
Ramos Oo Markale…
Daafaca kooxda kubbada-cagta ee Real Madrid, islamarkaana Koobka Adduunka kula guulleeystay xulka Spain ee Sergio Ramos, ayaa la dhiboonayay dhaawacyo joogto ah xilli ciyaareedkan iyadoo uu haatan ka soo kabanayo dhaawac kale oo soo gaaray.
Ramos ayaa ka cabanaya dhaawac cusub oo muruq ah waxaana uu haatan ku jiraa qolka daryeelka gaarka ah ee kooxda Real Madrid si xaaladiisa wax looga qabto.
Dhaawacan cusub ee soo gaaray kabtanka Real Madrid ayaa kusoo beegmaya xilli uu wajahayo loolan dhanka waqtiga ah si uu markale kooxda ugu cayaaro maadaama waqtigiisa Madrid uu gebogebo kusii dhowaanayo.
Sergio Ramos ayaa dhibaatooyinkan taam ahaanshiyaha ah si joogta ula dhiboonaya xilli ciyaareedkan, iyadoo cabashadan muruqa ah ay haatan ka dhigeyso inuu garoomada ka maqnaado maalmo dhowr ah.
‘Soo kabashadiisa ayaa sii socon doonta in la qiimeeyo’ ayay kooxda Real Madrid ku sheegtay bayaan ay daabacday.
35 jirkaan, ayaa ku soo laabtay kooxda Real Madrid guuldarradii semi-finalka Champions League-ga ee Chelsea kasoo gaaray waxaana uu xiddigani rajeynayaa inuusan maqnaan doonin muddo dheer si uu xagaagan ugu dhaqaaqo meelo kale maadaama uu noqonayo wakiil xor ah marka uu qandaraaskiisa dhammaado.